The Ab Presents Nepal » सर्पले टोक्यो ? चिन्ता नलिनुहोस यसरी २ मिनेटमै घरेलु बिधीबाट निको पार्न सकिने पढ्नुहोस पुदिनाको बहुगुण!
सर्पले टोक्यो ? चिन्ता नलिनुहोस यसरी २ मिनेटमै घरेलु बिधीबाट निको पार्न सकिने पढ्नुहोस पुदिनाको बहुगुण!
बहुगुण भएको बनस्पति हो पुदिना । पुदिनाको विषयमा धेरैले चासो लिन थालेका छन् । यसले धेरै रोगबाट हामीलाई बचाउछ । यसलाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्नुको साथै यसलाई हामी अचारबानाएर पनि खाने गर्छौ । पुदिना को अचार खादा हाम्रो शरीर लाई धेरै फाईदा पुर्याउछ ‘।
केहीलाई यसको स्वाद मन पर्ला त केहीलाई मन नपर्न पनि सक्छ । तर यसको गुण तपाईले थाहा पाउनु भयो भने सधैं पुदिना खान थाल्नुहुनेछ । पुदिनाको पातहरु सँगै ३ थोपा जती कागतीको रस मिलाएर मुहारमा लगाउने र पाँच मिनेट पछि यसलाई सफा गर्नु पर्दछ । तेसो गर्नाले मुहार सफा हुनुका साथैै सफा र मुुुलाएम बनाउछ’।
हप्ता सम्म निरन्तर यसको प्रयोग गरेमा अनुहारमा आउने डण्डिफोर र डण्डिफोरबाट बनेका खिलबाट पुरै मुक्ति पाउन सक्नुहुनेछ’ ।
साथै करिब एक गिलास पानिमा पुदिनाका १० वटा जति पातहरु, थोरै कालो मर्चा र थोरै कालो बिरेनुन हालेर उमाल्नु पर्दछ । पाँच मिनेट उमालिसकेपछि पानी छानेर पिएमा रुघा खोकीबाट बच्न सकिन्छ । पेट दुखेको बेलामा अदुवाको रससँग यसको पात घोटेर पानी बनाएर खाएमा दुखाइ कम हुन्छ’ ।
मुख गन्हाउने समस्या भएकाहरुले पुदिनाको सुख्खा पातहरु लाई पिसेर मञ्जन गरे जसरी दाँतमा घोटेमा यसले मुखबाट आउने दुर्गन्धलाई कम गर्दछ ‘।
गिजालाई पनी यो विधिले बलियो पार्दछ । यसैगरी यदी शरिरमा दाद वा छालामा फुस्रोपना आएमा पुदिनाको पातलाई दिनमा चार पटक दाद आएको ठाउँ वा फुस्रो भएको ठाउँमा लगाएमा निको पार्दछ । पुदिनाले बिच्छी वा सर्पले टोकेको बिषलाई पनि यसले मार्छ । बिषालु ठाउँमा पुदिनाको पातको रस लगाएमा बिष मार्न केही हद सम्म सहयोग पुर्‍याउछ ‘।
ज्वरो आएका बेला पुदिनाको रस महमा मिलाएर खाँदा ज्वरो कम हुन्छ । अपच भएर पेट दुखेको छ भने पदिनाको रसमा अदुवाको रस र बिरे नूनको धूलो मिलाएर खानुहोस् ।पिनासका बिरामीलाई पनि पुदिनाको रस लाभदायक हुने बताइन्छ । बहुगुण भएको बनस्पति हो पुदिना । पुदिनाको विषयमा धेरैले चासो लिन थालेका छन्’।
“यो समाचार कस्तो लाग्यो कमेन्ट गरि समाचार सेयर गर्नुहोस “